छन्त्याल संघको अध्यक्षमा म्याग्दीका बुढाथोकी निर्वाचित ! – ebaglung.com
छन्त्याल संघको अध्यक्षमा म्याग्दीका बुढाथोकी निर्वाचित !
२०७३ पुष २०, बुधबार ०७:५३	थप समाचार
म्याग्दी २०७३ पुस २० । नेपाल छन्त्याल संघको केन्द्रीय अध्यक्षमा म्याग्दी ओखरबोटका मोहन बुढाथोकी छन्त्याल निर्वाचित भएका छन् ।
पोखरामा मंगलबार सम्पन्न भएको संघको छैठौ राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट छन्त्याल निर्वाचित भएका हुन् । संघको केन्द्रीय समितिमा बरिष्ठ उपाध्यक्षमा खगेन्द्र छन्त्याल, महिला उपाध्यक्षमा मनमायाँ छन्त्याल, उपाध्यक्षमा पदम छन्त्याल, महासचिवमा बलमान छन्त्याल, उपमहासचिव रेशम छन्त्याल, सचिब तारा मिलन छन्त्याल, कोषाध्यक्ष शिव छन्त्याल, सह–कोषाध्यक्ष याम छन्त्याललाई चयन भएका छन् ।
महाधिवेशनबाट सदस्यमा अम्वीर छन्त्याल, कल्पना छन्त्याल, लोक शंकर छन्त्याल, चुणामणी छन्याल,यमुनादेवी छन्त्याल, थममायाँ छन्त्याल, टिकाराम छन्त्याल, श्रीप्रसाद छन्त्याल, गणेश छन्त्याल, थम बहादुर छन्त्याल, अम्बीर छन्त्याल, श्याम छन्त्याल, गोविन्द छन्त्याल, खिम बहादुर छन्त्याल, खगेन्द्र छन्त्याल, भिम छन्त्याल, देवप्रसाद छन्त्याल, प्रथम छन्त्याल, लक्ष्मिप्रसाद छन्त्याल, टिकाबहादुर छन्त्याल र शंखबहादुर छन्त्याल लगायत चयन भएको जनाईएको छ ।
नवनिर्वाचत अध्यक्ष मोहन छन्त्यालले छन्त्याल जातीको उत्थान र समुदायको हक अधिकारको लागि आफुले प्रयास गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । म्याग्दी, बागलुङ, मुस्ताङ, रुपन्देही, काठमाडौँ, रोल्पा, कास्की लगायतका जिल्लामा करिब १४ हजारको हाराहारीमा छन्त्याल जातिको बसोबास रहेको छ ।
म्याग्दी बहुमुखी क्याम्पसमा अनेरास्ववियुको बिरोधपछी शुल्क बृद्धि स्थगित !
मुस्ताङ जिल्लामा डेढ महिनाको अवधिमा १३३ जना मतदाता थपिए !